Dibad-Baxyada Ka Dhan Ah Dowladda Oo Ku Biiray Arday Iraq - Awdinle Online
Dibad-Baxyada Ka Dhan Ah Dowladda Oo Ku Biiray Arday Iraq
October 28, 2019 (AO) – Ardayda iyo ciyaal iskuulka ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada Baghdad iyo koonfurta Iraq, si ay ugu biiraan dibad-baxyada ku baaqaya in dowladda ay is-casisho.
“Iskuul ma jiro, fasallo ma jiraan illaa maamulka uu ka burburo” ayey ku qeylinayeen dibad-baxayaasha magaalada Diwaniyah, oo 180 km koonfur galbeed ka xigta magaalada Baghdad.
Magaalada Baghdad iyo koonfurta dalka ayaa waxaa ruxay wareeggii labaad oo dibad-baxyo ka dhan ah dowladda oo lagu eedeeyey musuq-maasuq, shaqo la’aan iyo adeego xumo.
Isku dhacyo ka dhashay dibad-baxyada ayaa waxaa lagu dilay 70 qof, tan iyo khamiistii.
Midowga jaamacadaha iyo iskuulada Diwaniyah ayaa maanta ku dhowaaqay toban maalmood oo shaqo joojin ah “ilaa uu ka dhaco taliska Ciraq”, ayada oo kumanaan arday iyo macallimiin jaamacadeed ay isugu soo baxeen waddooyinka.
Sidoo kale, qareenno iyo injineero ayaa ku biiray dibad-baxyada, ayaga oo xannibaado dhigtay waddooyinka loo maro xarumaha dowladda, si ay uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisyadooda.
Dibad-baxyada ayaa imanaya ayada oo wasiirka tacliinta sare uu axaddii uga digay bahda waxbarashada inaysan ka qeyb qaadan dibad-baxyada.
Afhayeen u hadlay ra’iisul wasaare Adel Abdel ayaa xitaa ku hanjabay in iskuuladii ka qeyb gala dibad-baxa ay “ciqaab adag mari doonaan.”
Balse dibad-baxayaasha ayaa iska dhego-tiray hanjabaadahaas, ayaga oo waddooyinka isugu soo baxay maanta.
Previous articleSomalia’s President Signed National Revenue Law
Next articleXeer hoosaadkii ay ku shaqey lahaayen Guddiga doorashada Galmudug oo la ansixiyey